Meta ဖော်ပြချက် - SEO အတွက်သင်သိထားသင့်သမျှ
တစ်ခါတစ်ရံစျေးသည်များကသစ်ပင်များအတွက်သစ်တောကိုမမြင်နိုင်ပါ။ အဖြစ် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ကစျေးကွက်သမားများသည်ရာထူးနှင့်နောက်ဆက်တွဲအော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုအဓိကထားအာရုံစိုက်နေကြသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ၎င်းတို့အကြားအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအဆင့်ကိုသူတို့မေ့သွားကြသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်း၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရည်ရွယ်သောသင်၏စာမျက်နှာပေါ်ရှိရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအသုံးပြုသူများကိုမောင်းနှင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ နှင့် meta ဖော်ပြချက်များသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှသင်၏စာမျက်နှာအထိသက်ဆိုင်ရာကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရန်သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအားတွန့်သွားသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များစာမျက်နှာ (SERP) အတွင်းပြသထားသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသို့တင်ထားသောစာမျက်နှာအကြောင်းဖော်ပြချက်များကိုရေးသားခွင့်ပြုသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ပုံမှန် meta ၏ဖော်ပြချက်၏ပထမ ၁၅၅ မှ ၁၆၀ အက္ခရာများကို desktop ရလဒ်များအတွက်အသုံးပြုပြီးမိုဘိုင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများအတွက် ~ ၁၂၀ အက္ခရာများကိုဖြတ်နိုင်သည်။ Meta ဖော်ပြချက်များသည်သင်၏စာမျက်နှာကိုဖတ်နေသူတစ် ဦး ဦး၊ နောက်ခံ crawlers များအတွက်သာမမြင်နိုင်ပါ။
meta ဖော်ပြချက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ် HTML ရဲ့အပိုင်းကိုအောက်ပါအတိုင်း format လုပ်တယ် - \_ t
နာမတျောကို="ဖေါ်ပြချက်" အကြောင်းအရာ="သင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်စေရန်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းများနှင့်နည်းပညာကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းအတွက် Martech ၏ ဦး ဆောင်ထုတ်ဝေမှု။"/>
ဒီအချက်ကိုမတူညီတဲ့ရှုထောင့်နှစ်ခုကကြည့်ကြရအောင် ... search engine နဲ့ search user:
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခေါင်းစဉ်၊ ခေါင်းစဉ်များ၊ မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပါဝင်သည့်အရာများကိုအာရုံစိုက်ပြီးသင်၏စာမျက်နှာကိုတွယ်သွားသည်။ ငါဒီမှာ meta ဖော်ပြချက်မပါဝင်ကြောင်းသတိပြုပါ ... ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်စာမျက်နှာကိုမည်သို့ရည်ညွှန်းရမည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါ meta ဖော်ပြချက်တွင်စာသားများထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာသို့သက်ရောက်သည်။SERP) entry ကို။
အကယ်၍ သင် meta ဖော်ပြချက်တစ်ခုပေးခဲ့လျှင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏ SERP ရေးသွင်းချက်အောက်တွင်ဖော်ပြချက်အဖြစ်ဖော်ပြပေးသည်။ သင် meta meta ဖော်ပြချက်မပေးခဲ့ပါက search engine သည်ရလဒ်ကိုသင်၏စာမျက်နှာ၏ content အတွင်းမှသက်ဆိုင်သည်ဟုယူဆသောစာကြောင်းနှစ်ခုဖြင့် indexes ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့်ခေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍ မည်သို့အဆင့်သတ်မှတ်မည်၊ ၎င်းတို့သည်သင့်အတွက်ရည်ညွှန်းထားသည့်ဝေါဟာရများအတွက်သင်၏ဆိုဒ်သို့မဟုတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မည်သည့်သက်ဆိုင်သောလင့်ခ်များကိုသတ်မှတ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် နိုင် သင်၏ SERP ရလဒ်ကို နှိပ်၍ ရှာဖွေသူများကိုရှာဖွေခြင်းသည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ရှိနေခြင်းသို့မဟုတ် SERP သို့ပြန်ခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင် မူတည်၍ သင်သတ်မှတ်သည်။
ရှာဖွေသူအသုံးပြုသူသည်သော့ချက်စာလုံးများ (သို့) ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုကိုထည့်ပြီး SERP ပေါ်သို့ဆင်းသည်။
SERP ရလဒ်များကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများအားသူတို့၏ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့်ရှာဖွေမှုမှတ်တမ်းအပေါ် မူတည်၍ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသည်။
ရှာဖွေသူသည်ခေါင်းစဉ်၊ URL နှင့်ဖော်ပြချက် (meta ဖော်ပြချက်မှယူသည်) ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူသော့ချက်စာလုံး (များ) ကို SERP ရလဒ်ဖော်ပြချက်အတွင်းမီးမောင်းထိုးပြသည်။
ခေါင်းစဉ်၊ URL နှင့်ဖော်ပြချက်အပေါ် မူတည်၍ ရှာဖွေသူသည်သင်၏ link ကိုနှိပ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။
သင်၏ link ကိုနှိပ်သူသည်သင်၏စာမျက်နှာသို့ရောက်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ စာမျက်နှာသည်သူတို့လုပ်ဆောင်နေသည့်ရှာဖွေမှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိလျှင်၊ သူတို့သည် SERP သို့ပြန်သွားပြီးအခြားစာမျက်နှာကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ ဂူဂဲလ် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာတွင် meta ဖော်ပြချက်များနှင့် meta သော့ချက်စာလုံးများကဂူဂဲလ်၏အချက်အလက်များအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းသည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် algorithms ၀ က်ဘ်ရှာဖွေမှုအတွက် ... သို့သော်၎င်းသည်ထပ်မံဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည့်အလွန်တိကျသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ သင်၏ meta ဖော်ပြချက်အတွင်းရှိစကားလုံးများနှင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုသင်တိုက်ရိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများ၏အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏သုံးစွဲသူ၏အပြုအမူသည်သက်ဆိုင်ရာရှာဖွေမှုရလဒ်အတွက်သင်၏စာမျက်နှာ၏အဆင့်တွင်လုံးဝအရေးပါသည်။
အမှန်မှာ၊ သင်၏စာမျက်နှာသို့ click လုပ်သူများကသူတို့ဖတ်ပြီးမျှဝေနိုင်သည့်အလားအလာကိုတိုးပွားစေသည်။ သူတို့သည်စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဝေမျှခြင်းများလေလေ၊ သင်၏အဆင့်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်လေလေဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်… meta ဖော်ပြချက်သည်သင်၏စာမျက်နှာ၏ search engine တွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူအပြုအမူအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်!
ဒီဥပမာကိုငါပြသသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး က“ martech” ကိုသာရှာဖွေခဲ့လျှင်၊ သူတို့သည် Martech ၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုသာစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ထိပ်ဆုံးရလဒ်များတွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ meta ဖော်ပြချက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပိုမိုမြင်သာသောရလဒ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမစိုးရိမ်ပါ။
ဘေးထွက်မှတ်စု - ကျွန်ုပ်တွင်စာမျက်နှာမရှိပါ Martech ကဘာလဲ? ဒါကကျွန်တော်ဒီသက်တမ်းအတွက်အဆင့်မြင့်ပြီးသားဖြစ်လို့ဒီတစ်ခုသုံးဖို့ငါ့အတွက်မဟာဗျူဟာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
အဘယ်ကြောင့် Meta ဖော်ပြချက်သည်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများအတွက်အရေးပါသနည်း
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်အသုံးပြုသူများကိုသာလွန်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုပေးလိုသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သင်၏ meta ဖော်ပြချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ meta ဖော်ပြချက်အတွင်းသင်၏အကြောင်းအရာများကိုတိတိကျကျမြှင့်တင်ပါကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူအားသင်၏စာမျက်နှာကိုလာလည်စေ။ ထိုနေရာတွင်ထိုနေရာ၌ထားပါ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏အဆင့်ကိုပိုမိုယုံကြည်မှုရှိမည်။ အခြားအဆင့်မြင့်သောစာမျက်နှာများသည်အသုံးပြုသူများကိုတိုးပွားလာစေပါကသင်၏အဆင့်ကိုပင်တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ။
Search ကိုအသုံးပြုသူများသည် - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာသည်ကျပန်းစာလုံးများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာအတွင်းမှရိုက်ထည့်လိုက်သောကြောင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူအားသင်၏စာမျက်နှာပေါ်တွင် နှိပ်၍ မရပါ။ သို့မဟုတ်၊ သင်၏ဖော်ပြချက်သည်စာမျက်နှာပါအကြောင်းအရာနှင့်မသက်ဆိုင်ပါကသူတို့သည်နောက် SERP စာမူကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
meta ဖော်ပြချက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် On-page SEO ၏အရေးကြီးသောလက္ခဏာ အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်ကြောင့်
ထပ်တူအကြောင်းအရာ - meta ဖော်ပြချက်များသည်သင်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည် အကြောင်းအရာပွား သင့်ဆိုဒ်အတွင်း။ အကယ်၍ သင့်တွင်အလွန်ဆင်တူသောအကြောင်းအရာနှင့်တူညီသော meta ဖော်ပြချက်ပါသည့်စာမျက်နှာ ၂ ခုရှိသည်ဟုဂူးဂဲလ်ကယုံကြည်ပါကသူတို့သည်အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာကိုအဆင့် သတ်မှတ်၍ ကျန်အပိုင်းများကိုလျစ်လျူရှုလိမ့်မည်။ စာမျက်နှာတိုင်းတွင်ထူးခြားသော meta ဖော်ပြချက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စာမျက်နှာများသည်တွန့်လိမ်ခြင်းမရှိစေရန်နှင့်ထပ်တလဲလဲပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများဖြစ်ရန်သေချာစေသည်။
keywords - စဉ်တွင် keywords အတွက်အသုံးပြုသည် meta ဖော်ပြချက် သင့်စာမျက်နှာ၏အဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်မထိခိုက်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရှာဖွေမှုရလဒ်များအတွက်, ရလဒ်မှအချို့သောအာရုံကိုဆွဲ။
ကလစ်နှိပ်မှတဆင့်နှုန်းထားများ - meta ဖော်ပြချက်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူအားသင်၏ site ၏ or ည့်သည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ meta ဖော်ပြချက်များသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများကိုအလွန်ဆွဲဆောင်အားကောင်းစေရန်ဖောက်သည်များနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်သည်။ သော့ချက်စာလုံးများကိုအဓိကအာရုံစူးစိုက်မှုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး အားအရေးယူရန်မောင်းနှင်ရန်သင်၏အမြင့်နှင့်ညီမျှသည်။
Meta ဖော်ပြချက်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်သိကောင်းစရာများ -
အကျဉ်းချုပ် အရေးပါသည်။ မိုဘိုင်းရှာဖွေမှုများမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှစာလုံးရေ ၁၂၀ ထက်ကြီးသော meta ဖော်ပြချက်များကိုရှောင်ရှားပါ။
ကိုရှောင်ကြဉ် meta ဖော်ပြချက်ပွား သင့် site ကိုဖြတ်ပြီး။ meta ဖော်ပြချက်တိုင်းသည်ကွဲပြားခြားနားရမည်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်၎င်းကိုလျစ်လျူရှုလိမ့်မည်။
စာပိုဒ်တိုကိုအသုံးချပါ စာဖတ်သူကိုစပ်စုစေသည်သို့မဟုတ်သောသူတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပညတ်တော်မူ၏။ ဒီမှာရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူတစ်ယောက်ကိုသင့်စာမျက်နှာကိုနှိပ်ခိုင်းဖို့ပါပဲ။
linkbait ကိုရှောင်ပါ meta ဖော်ပြချက်။ အသုံးပြုသူများကို နှိပ်၍ နှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်သင်ဖော်ပြခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်ကိုမတွေ့ပါကရှာဖွေရေးအင်ဂျင် visitors ည့်သည်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်သင်၏စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်နိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
စဉ် သော့ချက်စာလုံးတွေ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူသည်ရလာဒ်များကိုဖတ်သည့်အခါသော့ချက်စာလုံးများကိုပေါ်လွင်စေသောကြောင့်သူတို့သည်သင်၏အဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ကူညီရန်မလိုသော်လည်းသူတို့သည်သင်၏ကလစ်လုပ်နှုန်းကိုကူညီလိမ့်မည်။ meta ဖော်ပြချက်၏ပထမစကားလုံးများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာသော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ။
စောငျ့ရှောကျ သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်သင်၏ကလစ်နှစ်ဆင့်စလုံး သက်ဆိုင်သောအသွားအလာနှင့်ပြောင်းလဲမှုများတိုးမြှင့်ဖို့သင့်ရဲ့ meta ဖော်ပြချက်ကိုချိန်ညှိ ... နှင့်! သင်၏ meta ဖော်ပြချက်ကိုတစ်လအတွင်း update လုပ်သည့် A / B စစ်ဆေးမှုအချို့ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
သင်၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် Meta ဖော်ပြချက်များ
သင်သည် Squarespace၊ WordPress၊ Drupal သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုနေသည်ဖြစ်စေ CMSသူတို့ကမင်းရဲ့ meta description ကိုမွမ်းမံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာသေချာပါစေ။ ပလက်ဖောင်းအများစုတွင် meta ၏ဖော်ပြချက်အကွက်သည်သိသာထင်ရှားခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းကိုသင်ရှာရပေမည်။ WordPress အတွက်၊ အဆင့်သင်္ချာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပါသည် ထောက်ခံချက် Desktop (သို့) မိုဘိုင်းတွင်ကြည့်ရှုသည့်အတိုင်း၎င်းသည်အသုံးပြုသူအား meta ဖော်ပြချက်အားကောင်းမွန်သောကြိုတင်ကြည့်ရှုမှုပေးသည်။
စာမျက်နှာတစ်ခုကို သင်ထုတ်ဝေသည့်အခါ သို့မဟုတ် ၎င်းကို ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်လိုသည့်အခါတိုင်း၊ သင်၏ click-through နှုန်းများကို တိုးမြင့်လာစေရန်နှင့် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ကောင်းမွန်သော ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတွင် meta ဖော်ပြချက် optimization ကို လုံးဝအကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Tags: Affiliate link ကိုကလစ် - မှတဆင့်မှုနှုန်းအကြောင်းအရာပွားmeta ဖော်ပြချက်ဘယ်လောက်ကြာသည်meta ဖော်ပြချက်သည်ဇာတ်ကောင်မည်မျှရှိသနည်းသော့ချက်စာလုံးအသုံးပြုမှုသော့ချက်စာလုံးတွေmeta ဖော်ပြချက်meta ဖော်ပြချက်အရှည်meta ဖော်ပြချက်meta သော့ချက်စာလုံးများserpmeta ဖော်ပြချက်ပိုကောင်းအောင်များအတွက်အကြံပေးချက်များ
သြဂုတ် 14, 2010 မှာ 8: 57 AM
အကြံဉာဏ်ကောင်း။ WordPress All-in-One SEO အတွက် ကျွန်ုပ်အနှစ်သက်ဆုံး ကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုသည် coding အကြောင်း များစွာမသိဘဲ ရိုးရှင်းသော စာမျက်နှာ စောင်းများနှင့် ဖော်ပြချက်များကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။ (စကားမစပ်၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား All-in-One နှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်) ထို့ကြောင့် နှစ်ခုစလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သြဂုတ် 14, 2010 မှာ 11: 23 AM
Lorraine၊ AIOS နှင့် Google XML Sitemap များသည် WordPress ဆိုက်တိုင်းအတွက် ကျွန်ုပ်၏ မရှိမဖြစ် 'မရှိမဖြစ်' နှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် WordPress သည် ၎င်းတို့ကို ပင်မကုဒ်တွင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ထည့်သွင်းမထားသည့်အတွက် အံ့သြမိပါသည်။ WordPress သည် သင့်အား 75% ခန့်သာ ရရှိသည်...။ ထိုပလပ်အင်များသည် သင့်ပလပ်ဖောင်းကို အပြည့်အဝဖွင့်ထားနိုင်သည်။
မေလ 17, 2013 မှာ 2: 41 pm တွင်
အမြဲတမ်း သဘောကျစရာကောင်းတဲ့ ပို့စ်။ ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကပဲ အသင်းနဲ့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug
မေလ 17, 2013 မှာ 2: 44 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @jrdorkin:disqus !
မေလ 18, 2017 မှာ 6: 35 pm တွင်
မက်တာဖော်ပြချက်မပါသော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင် ၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကို ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားသူတစ်ဦးကို တွေ့ရှိရခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်သည် လုံးဝအံ့သြသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် လူများနှင့် အလုပ်လုပ်သောအခါတွင် meta ဖော်ပြချက်သည် Google ရှိ ၎င်းတို့၏ အမျိုးအစားခွဲထားသော ကြော်ငြာကိုယ်ထည်ဖြစ်ကြောင်း သူတို့ကို ပြောပြပါသည်။ အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြချက်မပါဘဲ သင့်သတင်းစာမှာ တစ်ခုခုရောင်းဖို့ ကြိုးစားမှာလား။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ!
မေလ 19, 2017 မှာ 8: 29 AM